Ubuninzi beeNwele kunye neZenzo zoMoya
Ubude beenwele kunye neNkolo
Ngexesha elithile ekuhloliseni kwezithethe ezintsha zePagan, kunye noluntu oluthile, ubuya kuhlangana nomntu onokuxelela ukuba kufuneka ukhangele, ugqoke okanye utye ngendlela ethile. Enyanisweni, imbambano edla ngezinye ixesha yileyo ubude beenwele. Ngaba umPristi Omkhulu okanye uMbingeleli Ophakamileyo kufuneka abeke izikhokelo malunga nokuba ixesha elide-okanye ukuba lifutshane kangakanani iincwele zakho?
Okokuqala, masihlale sikhumbula ukuba iPagan iyigama lesambulo elibandakanya iindlela ezahlukeneyo zonqulo kunye neenkolelo, ngoko akukho mithetho emiselweyo, kwaye akukho nonke i-set of guidelines.
Ngaphandle kweetekethi ezithile zezenzo, ezifana neWicca okanye i- Druidry , kukho umlinganiselo obalulekileyo wokuhluka ukusuka kwelinye iqela ukuya kwelinye, ngoko ukuba umPristi Ophakamileyo wayenokuthi kufuneka ube neenwele ezinde ukuba ube yinxalenye "yenkolo yethu," oko akuthethayo ngokwenene "iqela lakhe elithile." Mhlawumbi unkulunkulukazi weqhinga lakhe likhetha abalandeli abangagqithisi iinwele zabo, kodwa oko akuthethi ukuba unkulunkulukazi onguPagani wenza into efanayo.
Ngamanye amazwi, unako ukuphumla kwaye uqiniseke ukuba usenokufumana iqela elifanelekileyo, kwaye ugcine iinwele zakho kunoma yisiphi isimbolo okhetha ukuyigqoka, ngaphandle kwengcinezelo yokutshintsha.
Oko kwathiwa, imbono yeenwele ezinxulumene nenkolelo yenkolo yinto enhle kakhulu. Kwezinye iinkqubo zeenkolelo, iinwele zidibaniswa namandla omlingo. Kutheni oku? Ewe, inokuba yinto engokwengqondo. Thatha, umzekelo, umfazi onenezinwele ezinde owugqoke ngobuncwane obuhle, wabuya ebusweni bakhe, ngelixa esebenza.
Inwele yakhe igcinwa ngokunyanisekileyo xa eqhuba umsebenzi wayo, iyanceda yakhe intsapho, njalonjalo. Kodwa nangona kanye lo wesifazane ehamba kwindawo yokumlingo, uyasusa izikhonkwane kunye neenkomfa, ukubeka iinwele zakhe ngaphandle-kuyinkululeko yokukhulula, ukuvumela ukuba izinwele zakho zibe phantsi. Ivelisa ingqiqo yamandulo kunye nokuziphatha okubi ngokobulili ngokukhawuleza, kwaye oko ngokwayo kunokuba namandla kunene.
Njengomnye umzekelo ekupheleni kwebala, qwalasela inhloko yentloko yomluki. NgamaBuddha, amava ahlambela iintloko zawo njengenxalenye yenkqubo yokulahla izinto eziphathekayo kunye nezibophelelo zabo kwihlabathi eliphathekayo. Intloko yentloko yenza i-monk nganye ilingana nabazalwana bakhe ebusweni bukaThixo, kwaye ivumela ukuba bagxininise ngokomoya.
Ukumboza nokugubungela iNwele
Kwezinye iicawa, abafazi bakhetha ukumboza iinwele zabo. Ngoxa lo mkhuba uvame ukuhlanganiswa nokuthozama, kwezinye izithethe zibhekiselele ekunqandeni kwamandla. Nangona kungenjalo isiko eliqhelekileyo leWiccan okanye lamaPagani, kukho amanye amaPagan ayenayo le nkqubo kwinkolelo yabo. UMarisa, wasePalikani wasePalifornia olandela umendo we- eclectic oqokelelwe kwizithethe zaseMpuma, uthi, "Ndiyazibekela iinywele zam xa ndiphuma, kuba kum, kuyimiba yokugcina amandla okwakhiwa kwekristi equlethwe. Ndiyifumene xa senza isiko, kuba i- chakra yesithsaba ivulekile kwaye ingenakuvinjelwa, kwaye indivumela ukuba ndixoxe ngokuthe ngqo kwi-Divine. "
Kwimizekelo yamasiko omlingo womntu, iinwele zinxulumene kakhulu nomoya womntu, kwaye zingasetyenziswa njengendlela yokulawula umntu. Kukho iindlela zokupheka ezingenakubalwa ezifunyenwe kwi- hoodoo kunye neengcambu ezibandakanya ukusetyenziswa kweenwele zabantu njengenxalenye yesipelo okanye "inkohliso," ngokutsho kukaJim Haskins kwincwadi yakhe ethi Voodoo noHoodoo .
Ienkolelo kunye neNkcubeko
Ukongezelela, kukho iinkolelo nezithethe malunga neenwele, ngakumbi xa kuziwa ekuhleni. Kukholelwa kwiindawo ezininzi ukuba unqumle iinwele zakho ngexesha lokuthwasa kwenyanga, liza kukhula ngokukhawuleza-kodwa iinwele ezinqunywe ngexesha lobumnyama lwenyanga ziyakuncipha kwaye mhlawumbi ziya kuphuma! I-SeaChelle, umlusi oqheliselayo intsapho yakhe enezimpande kwi-Appalachia, uthi, "Xa ndiyintombazana encinci, u-ugogo wayedla ukuxelela ukuba emva kokuba esinqumle iinwele zethu, kwafuneka siyeke ingcwaba. Awunakuyitshisa, kuba yayiza kwenza ukuba iinwele owaye ushiye zikhule ziqhube, kwaye awukwazi ukuphosa ngaphandle, kuba iintaka zazitheba ukuba zisetyenziseni izidleke zazo, kwaye oko kwakukunika inwele. "
Ley Lines: Amandla Emilingo Emhlabeni
Ngaba Iintlanga Zikholelwa KuThixo?
Iiresi zeSabbat yeSibbat
Stonehenge, eWiltshire, e-UK
Ngaba amaPagan kufuneka afunge kwiBhayibhile enkundleni?
Yenza I-Smudge Yakho Imithi
"Ngenye imini" nguMitch Albom - Ukuhlaziywa kweNcwadi
Kutheni 'Ukungakholelwa kuThixo' Akufanele kutyunjwe
Iifayile ezili-Great Great Classic zeFree to Get You started
I-Top 15 yamaKhono okuQiniswa kweeNgoma ze-2018
Iimpawu ezingamangalisa zeMars
Iimpawu zeeMisebenzi kunye neeMifanekiso zoMbala
UYohane oNgcwele uMbhaptizi, uPatron Saint wokuguqulwa
Inzala ka-Amelia Earhart
Yonke NgeFrentshi Engabonakaliyo 'i-Verbs'
Ulawulo lwebala lokubeka iiPowula
Iimfazwe zeNkwenkwezi Ukugcina ixesha-ABY kunye ne-BBY